Izesekeli nezinamathiseli factory, abahlinzeki - china izesekeli nezinamathiseli abakhiqizi
Ukhokho Nama-Ribbed Pads
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, ukhokho wethu namaphakethe ezimbambo anikela ngezinga eliphakeme kakhulu lokuncishiswa kwemisindo nokuhlukaniswa kokudlidliza. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Ngaphandle kwalokho, kulula ukufakwa kwenkambu.
Amapayipi Wensimbi Nama-Ribbed
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izinsimbi zethu nezimbambo zethu zakhiwe ngoqwembe lwensimbi oluboshwe phakathi kwe-ribbed. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Ngaphandle kwalokho, zenzelwe umthamo omkhulu wokulayisha.
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, ama-flanges wethu ophahla aklanyelwe ukufaka isiphanyeko noma induku yokusekela emishayweni, ophahleni noma ezindongeni. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Intambo eyenziwe ngokwezifiso i-U-bolt enamantongomane
Njengenye yeziphanyeko zokuncintisana kakhulu zenkampani, intambo yethu eyenziwe ngokwezifiso i-U-bolt ngamantongomane yenzelwe Izicelo Zokuphayiza Okujwayelekile. Futhi ithole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi, eYurophu nase-Asia. Futhi, ngicela wazi ngomusa ukuthi kukhona amantongomane amabili ohlangothini ngalunye.
Isixhumi Se-Side Beam
Njengenye yeziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, izixhumi zethu zohlangothi lwezigodo zenzelwe ukunamathisela induku ye-hanger ohlangothini lwemishayo noma izindonga. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
Ul Top Beam Ngocingo
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu inkampani, phezulu ugongolo izibopho zethu ul evunyiwe. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi, eYurophu nase-Asia. Futhi, kukhona izindlela zokwelapha ezihlukile ongakhetha kuzo: Oku-lashukumisa kwangaphambili, i-Zinc, i-epoxy no-Green galvanized kumaliza ukuhlangabezana nezidingo zakho zokulwa nokugqwala kwamazinga ahlukene.
I-Ribbed Mounting Pad
Njengezinye iziphanyeko ezincintisana kakhulu zenkampani, amaphedi ethu okufaka izintambo enzelwe ukufaka isiphanyeko noma induku yokusekela emishayweni, ophahleni noma ezindongeni. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia.
Njengoba omunye iziphanyeko ukuncintisana kakhulu inkampani, waffle zethu pads zenzelwe nge-eyakhelwe ukuncela izinkomishi. Futhi bathole ukuthandwa okukhulu emhlabeni jikelele, ikakhulukazi eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Ngaphandle kwalokho, kulula ukufakwa kwenkambu.